पहिलेको सोचाइ भन्दा समुद्रको सतह छिटो उठ्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
पहिलेको सोचाइ भन्दा समुद्रको सतह छिटो उठ्छ
समुद्री सतहको वृद्धि ग्लोबल वार्मिंगको सबैभन्दा चिन्ताजनक प्रभाव हो। लाखौं मानिसहरू किनारमा र तल्लो तल्लो टापुहरूमा बस्छन्, त्यसैले यदि कारवाही गरिएको छैन भने, त्यहाँ पक्कै केहि दशकहरु मा विशाल पलायन हुनेछ.
अहिलेसम्म यो सोचेको थियो कि महासागरहरूको औसत तह प्रति वर्ष १.1,3-२ मिमि दरको दरले वृद्धि भयो; यद्यपि नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ कि यो छिटो उठ्छ.
पछिल्लो शताब्दीको दौडान वैज्ञानिकहरूले समुद्री सतहको वृद्धिको बारेमा प्राप्त गरेको जानकारी समुद्री जग्गाको नेटवर्कबाट आएको हो जुन समुद्र तटमा अवस्थित छ। यी उपकरणहरू धेरै उपयोगी छन् यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि यी क्षेत्रहरूमा कत्ति बढेको छ, तर उनीहरूले तपाईलाई समग्र नतिजा दिदैनन् जसरी तिनीहरू निश्चित हुनेछन्, अध्ययनको प्रमुख लेखक सोंके डानजेन्डोर्फले व्याख्या गरेझैं पृथ्वीको क्रस्टको ठाडो पृथ्वी आन्दोलन र क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता ढाँचा द्वारा जुन समुद्री परिसंचरण, वायुको पुनः वितरण वा प्रभावमा पर्ने परिणामबाट प्राप्त हुन्छ। पृथ्वीमा पानी र बरफको जनसमितिको पुनर्वितरणको गुरुत्वाकर्षण प्रभावहरू।
वैज्ञानिकहरूसँग अहिले अल्टिमटरहरू छन् जुन बोर्डको भूउपग्रहमा सबै महासागरहरूमा समुद्री सतहको निगरानी गर्दछ।
त्यसोभए, २० औं शताब्दीदेखि समुद्री सतह कति ठ्याक्कै बढेको छ भनेर पत्ता लगाउन उनीहरूले के गरे सब भन्दा लामो र उच्च गुणवत्ता रेकर्ड चयन गर्नुहोस्, र ती सबै कारकहरू सच्याउनुहोस् जुन गलत परिणाम दिन सक्छ र त्यसपछि ग्लोबल औसत लिन्छ।। यस तरिकाले उनीहरूले पत्ता लगाउन सके कि १ 1990 1,1 ० अघि समुद्री सतह प्रतिवर्ष १.१ मिलिमिटरसम्म बढेको थियो, तर १ 1970 s० को दशकदेखि यो वातावरणमा मानिसहरुको प्रभावले बढेको छ।
विश्वव्यापी औसत तापमानको बृद्धि संग, पोलहरूको पग्लनेले समुद्री तटलाई कम र असुरक्षित बनाउँछ।
तपाईं पूर्ण अध्ययन पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » पहिलेको सोचाइ भन्दा समुद्रको सतह छिटो उठ्छ